ProCam 3 - Cadaadiska Daran & Video on iPhone
Web & Raadi Webka ugu fiican
Maalmihii ugu horreeyay ee iPhone iyo App Store, barnaamijyada app ayaa bilaabay horumarinta barnaamijyada ku daray ama sifududay muuqaalada on iPhone-hore-qurux-wanaagsan-for-a-cell-telefoonka. Si dhakhso ah, ereyga "iPhoneography" ayaa lagu soo koobay, dhacaana wuxuu ku dhashay. Dunida oo aad ku haboon tahay kamarad IYO kumbuyuutar si loogu saxo oo loo wadaago sawirrada jeebkaada ayaa qaadatay xidid. Sida tiknoolijiyada iyo tayada muuqaalku u kordhay, halkii ay ku qaadi lahaayeen kamarad weyn ama barta - iyo - toogasho, dad badan ayaa go'aansaday in ay ka dhigtay dareen macquul ah oo lagu kalsoonaan karo kaamirooyinka casriga ah ee ay horay u qaadeen oo ay ku daadiyeen miisaanka kamarad ka weyn.
Nidaamka kamarad-dhiska ee la dhisay ayaa si tartiib ah loo cusbooneysiiyay, waxaana uu leeyahay dabacsanaan dheeraad ah oo la xakameynayo soo-dhoweynta. Weli waxaa loogu talagalay in lagu shaqeeyo sida aasaaska, barta-iyo-toogashada, kamarad sahlan ee isticmaala inta badan fekerkaaga.
Sawir qaadayaasha khibrad leh, si kastaba ha ahaatee, waxay jecel yihiin in ay xakameyaan xaddiga ugu sarreeya. Mararka qaar, baahidani waa lagama maarmaan maxaa yeelay kamarad xaddidan inay niyadjabto isticmaalka markaad isku dayeyso inaad isticmaasho dhammaan qaybaha wax soo saarkaaga iyo aqoonta farsamada ee sawir qaadista si aad u qabato sawirka aad aragtay. Inkastoo kamarad ku jirta iPhone aysan lahayn hannaan farsameysan oo la qabsi karo (f-joojinta) wuxuu leeyahay xawaare qabasho iyo goobaha ISO oo la beddeli karo.
Wixii sawir qaadayaasha ah ee dhamaadka kore ee shaxanka, ProCam 3 waa barnaamij qiimo leh oo wax lagu barto. Barnaamijka wuxuu ku yimaadaa qaabab badan iyo lakabyo xakameyn ah, way adkaan doontaa in la qabsado dhammaantood hal qodob. Heerka ugu sarreeya - waa suurtagal muuqaal ah oo muuqaal ah oo fiidiyoow ah, muuqaal sawir leh, iyo qalab edbin ah. On dhinaca video, waxay ahayd mid ka mid ah barnaamijyadii ugu horreeyay ee lagu soo bandhigo 4K video lagu duubo iPhone * iyadoo iibsigana lagu iibsado. Inkastoo iPhone 6S & 6S Plus ku leeyihiin cajalad 4K video ah, tani weli waa mid aad u adeegsanaya kuwa haysta iPhone 5, 5S, ama 6/6 Plus. On the side photo, waa mid ka mid ah barnaamijyada camera ugu rogrogmi karo, oo bixiya koontaroolka gacanta oo buuxa (oo ay ku jiraan diiradda gacanta). Iyo tifaftire ahaan, waxay bedeli kartaa barnaamijyo badan oo badan oo leh shaashadda midabka, kaleidoscope iyo saameynta aduunka ee yaryar.
Maqaalka dartiis, maqaalkani wuxuu dabooli doonaa saddex sifood oo muhiim ah sawir qaadayaasha kuwaas oo doonaya in ay xakameeyaan sawiradooda kahor inta aysan xirmin.
Raaco Paul on Instagram / Twitter
Shaxda Gawaarida Gaarka ah
Barnaamijka kamarad-ku-dhisay ayaa la cusbooneysiiyay ee ku yaala bogga 8-aad si loogu daro waxa ku-meel-gaar ah ee magdhowga. Waxaad ku shubi kartaa shaashadda si aad u sameysid feejignaanta iyo soo-qaadista, ka dibna sii daa si aad u sameyso sawirada si aad u iftiin ama hoos u dhigto si aad u sii darto. Barnaamijyo badan oo kale ayaa u oggolaaday xakameyn faahfaahsan oo ku saabsan soo-gaadhista, xataa xitaa qaybaha hore ee of IOS. ProCam waxay u oggolaatay full buuxa ISO, xawaaraha sawirka, magdhaw celinta, iyo xakamaynta miisaanka caddaanka ah ee dhammaan caqabaddeeda. Iyo qaabka ugu dambeeyay, dhammaan goobahaasi waa sahlan tahay in si deg deg ah loo hagaajiyo iyadoo la isticmaalayo qalabka korontada oo ka sareeya badhanka furaha.
Xaalado badan, si toos ah u-fiirsashada dhamaan barnaamijyada kamaradaha ayaa si fiican u shaqeeya. Awoodda aad ku xiri karto shaashadda si aad u dejiso qeybta sawir si aad uhesho natiijooyinka sawirada weyn. Iyo barnaamijyada kamaradaha kamaradaha badan ayaa kuu oggolaanaya inaad kala fogaato diiradda iyo soo-qaadista ProCam 3 ayaa tan sii dheer tanina waxay kuu ogolaaneysaa inaad si buuxda u xakameyso farsamada gacanta. Markaad taabatid meesha aad rabto inaad diirada saarto, qaabka caadiga ah ee wareega waa inuu bedelo diiradda saaraha. Marka aad hagaajinayso xajiyaha, goobaab ayaa soo baxaysa oo ballaarisaa meesha si ay kuu siiso diiradda saxda ah. Markaad doorato diiradda, waxaad ku xiri kartaa oo aad sameyn kartaa isbeddel dheeraad ah marka lagu soo bandhigo.
Marxaladda dheeraadka ah / Xawaaraha Qalabka Xawaaraha / Tareenka fudud
New to ProCam 3 waa hab-toogasho lagu dabagalayo saameynta isticmaalka xawaaraha qadar dhejiska dheer ah ee dhaqdhaqaaqa iyo iftiinka. Waxaa jira barnaamijyo kale oo u gooniya oo loo adeegsado saameyntani (LongExpo Pro & SlowShutter, tusaale ahaan). Laakiin ProCam 3 waxay ku darsataa xakameyn dheeraad ah, oo ku jirta version 6.5, kumbuyuutarka xakamaynta ee ISO, magdhawga celinta, xawaarida xawaaraha **, diiradda, iyo dheellitirka cad.
Maadaama muraayadahaasi badanaa la abuuray kamarad ku taala tripod, had iyo jeer waxay noqon kartaa mid caqli gal ah si loo helo heerka muuqaalka iyo degenaashaha. Adiga oo soo jeestay muuqaalka heerka horizon iyo shabakadda ProCam, waxaad arki kartaa marka sawirkaagu uu heerkiisu yahay adigoo raadinaya muujiyaha jaalaha ah. Si aad u xajisid waxyaabaha dheeraadka ah, waxaad ku xiri kartaa dhageysigaaga dhagaha oo waxaad isticmaali kartaa badhanka mugga sida haddii aad haysatid fiilo farsameed oo ku saabsan kamarad dhaqameed.
ProCam 3 waa app aad u awood leh oo leh sifooyin iyo ikhtiyaaro badan. Waxyaabahan oo dhan waxay wada shaqeeyaan si ay u siiyaan sawir qaadaha si xakameyn ah sawir la qaaday iPhone. Maqaalkani waa hordhac aasaasi ah oo aasaasi ah - si aad wax dheeraad ah uga ogaatid waxa ay bixiso, booqo shabakadda internetka ee bogga: www.procamapp.com. Waxaad sidoo kale raaci kartaa barnaamijka ProCam ee Instagram quudinta @procamapp_tutorials. * adigoo dib u qaabeynaya fiidiyowga 17% ka weyn oo u dhigma xalinta 4K. ** On DSLR ama kamarad kale oo leh jajab jirka ah, saameynta waxaa loo abuuray iyadoo la adeegsanayo xawaaraha dhabta ah. Sawir-gacmeedka iPhone ma laha jajab jirka ah, sidaa daraadeed "xawaaraha gidaarka" dhab ahaantii waa wax lagu maareeyo software. Xaaladdan oo kale, horumarinta app wuxuu xakameynayaa sawirka si ay u jilaan saameynta gaabis-xawaaraha gaaban ee qabashada. Xawaaraha sawirku waa hal doorsoome taas oo lagu maareyn karo si loo xakameeyo saameynta guud ee ProCam 3.
Sida loo wadaago, Embed, iyo Link YouTube Videos
AirPlay: Sidee Ayuu U Shaqeeyaa Iyo Maxaa Qalabkoodu Isticmaali Karaa?
The Top 10 Best 10 Saacadood oo Dheeraad ah Video on YouTube
Talooyin loogu talagalay Is-bahaysiga Muhiimka ah
CDDB: Hadafka Akhriska ee Laga Tago Maktabada Muusikada
Sida Looga Saari Doono Farshaxan Long Long Sawiro on iPhone ah
Meeqa Muusiko oo Gigabyte ah oo Haynta Loo Qabtay?
Baro sida leysugu bedelo Qalabka APN ee Mashiinka Moobaylka
Suuq geynta - Fikradaha iyo Fikradaha ee Suuq Geynta
Waa maxay micnaheedu yahay RL macnaha internetka?
Waa Maxay Noocyada Kumbuyuutarrada?
Sida loo gubiyo CD-yada leh iTunes
Sidee iTunes Plus Dareeraha looga soo Qaadanayo Nidaamka AAC ee Standard
Sida loo Maamulo Taariikhda iyo Browsing Data ee Safari ee iPad
Isticmaalka <input type = "tel">
Sida loo Caawiyo Barnaamijyada Old Windows 8 iyo Windows 10
Maxay tahay mashiinada farsamada?
Miyaan cusbooneysiin karaa Windows 8?
Maxay Foomka RTF?
Sida Loo Dhigo, Dhaafo ama Iskeelo Qoraalka Markaad Xaqiijin Karaan
Ku keydso keydinta "Cloud Cloud" leh Dropbox
ZVOX Audio SB400 iyo Boosaha SB500 Sound Profiles
Tilmaamaha Qaadashada Qadarka
Hagaha Bilowga ee Hagaajinta BASH - Qodobbada Qodobbada
Waa maxay DIFF Faylka?
Sida loo wadaago Faylka Google Drive
Sida Loo Helo AIM Mail ama AOL Boostada Faylka Isticmaalka Filters
Maktabadda Dadweynaha ee Sacramento waxay bixisaa shaybaar farsamo ah
Editing Video Clips ee Windows Movie Maker